UBoneni Magubane uyazifela ngomculo nokusiza abasafufusa | isiZulu
UBoneni Magubane uyazifela ngomculo nokusiza abasafufusa
Durban - Umculo kamasikandi wehle njengedlozi kuyena ngoba ubengaziboni engena kuwona ekukhuleni kwakhe kodwa ngenxa yobizo nekhono aphathiswe lona, kugcine sekwenzekile lokhu abekulethelwe emhlabeni ukuzojabulisa abathandi bomculo wesintu.
UFikile "Boneni" Magubane, 37, waKwaHlazakazi, eNquthu enyakatho neKwaZulu-Natal, ungumculi onekhono eliqhakazile futhi ozibonakalisile nakweminye yemicimbi ebiseThekwini nyakenye ukuthi ikhono lakhe lisabalale ngaphandle kokugxila kumasikandi kuphela ngoba nolunye uhlobo lomculo uyalwenza.
Ungumculi othandayo ukuvundulula amakhono kubaculi abasebasha ukuze nabo badume ngelinye ilanga baziphilise ngomculo.
UBoneni akasiyena umculi odlisa ngokuzihasha njengoba ethi akakholelwa kakhulu kukhona ngoba uhlonipha izinsizwa okuyizona ezaziwa ngokuzisho.
OLUNYE UDABA:Amantshontsho kaMaskandi: Ushanele ezibaluleke zodwa uKhuzani
ILANGA likhulume noBoneni lifuna ukuthola kabanzi ngaye. Uma ezisho, usho aphelele kanje:
"Sekunjalo balandeli besthole sikaMsenganduna, Inhlu***emhlophe ethi ingababomvu kube yafika nomlandakazi, Engathi mina ngifundile, Ashila!!!"
Lezi zihasho zakhe uthi zisho lukhulu kuyena ngoba zimenza azigqaje ngesibongo sakhe sakwaMagubane njengoba kuyizithakazelo zakhona. Uthi yena ungumasikandi ofundile futhi onamaphupho amakhulu ngempilo yingakho engazinyezi ngokufunda kwakhe.
Echaza ngomlando wakhe kwezomculo, uthi ungene ngonyaka wezi-1998 emuva kokuphothula umatikuletsheni ngowezi-1997 ePhakathwayo High khona eNquthu wase elibangisa eGoli eyokwenza umkhakha wekhompyutha wafike wazithela ezigincini nakuba wayenothando lokulingisa kodwa kwagcina kungenzekanga. Uthi kwezomculo ungene ngokuthi langa limbe ubephelezela uninalume wakhe uMnu Manqofoza Sithole eyozilolonga eqenjini iHhashi Elimhlophe kwazise ubegida kulona kwase kwakheka uthando lomculo nakuyena uBoneni.
Utshele leli phephandaba ukuthi emuva kwesikhashana kuzwakale izindaba zokuthi kuzosungulwa iqembu elibizwa ngeZintombi zikaHhashi Elimhlophe wase ebizwa ukuba ezojiyna kulona ngoba bese kubonakele ukuthi unalo uthando lomculo nebala wasebenza nalo.
Ngonyaka olandela lowo, uBoneni upikwe wafakwa kwelinye iqembu lona elabe lisungulwe ngomunye woprojusa base-Gallo Record uMnu Richard Siluma. Leli qembu belibizwa ngokuthi Abantwana Bothando kanti kuthe ngesikhathi leli qembu limatasatasa lilungiselela ukuphuma kwe-albhamu yalo yesibili lavelelwa umshophi wokudlulelwa ngamalunga alo okubalwa nocula phambili kulona.
Kulapho uBoneni ethathiwe khona wafakwa kwelinye iqembu likaSimosakhe Mthalane(ongasekho) ebelaziwa ngokuthi iMbabazane.Uqhubekile kuleli qembu wase efakwa nakwiMthente kanti kuwona wonke lamaqembu ubegida abuye alekelele lapha nalapha ekuculeni.
"UMthalane wangibona ngigida kuBantwana Bothando kwa-Mai-Mai eGoli wase enginxenxa ukuba ngisebenze naye wathi badala kakhulu labantu engicula nabo. Kwezomculo nje ngiyinzalo yeHhashi Elimhlophe okuyilona elangiqeqesha nakuba bese nginalo uthando lomculo kodwa ukusondela kumalume ngihambe naye uma beyozilolonga kungisizile.
"Bengifuna ukubona ukuthi kwenzekani uma bezilungiselela. Kuthe ngesikhathi sengizwa ukuthi kufuneka amantombazane azocula ngoba kukhona iqembu elisha elizokwakhiwa, nami ngase ngiyaya kwaba ukungena kwami emculweni ngenxa yeHhhashi," kusho uBoneni.
Uthi ukungena kwakhe akubanga yinto elula ngoba ababemubuka bese bemungabaza ukuthi angakwazi ukucula umasikandi. Uveze ukuthi kulamaqembu aqale kuwona ubegida ngoba bekuthiwa ngeke akwazi ukuucula phambili.
Utshele ILANGA ukuthi lokho bekungamuphathi kabi ngoba ubethokozela ukuba yingxenye yamaqembu amakhulu ezimisele nangokufunda ngokuningi kulabo ebebecula phambili ngalezo zikhathi. Uthi kuthe ngonyaka wezi-2005 wezwa ngoMthalane ukuthi inkampani i-Bula Music ifuna ukusungula iqembu labesifazane likamasikandi manje icele yena ukuba ayitholele amantombazane naye utshelwe nguPhathaphatha Ngcobo obecelwa nguMnu Tshepo Nzimande obesebenza eBula.
"Sihambile noMthalane saya eBula, bangibuza ukuthi ngiyakwazi yini ukucula umasikandi bengangithembi base bekhipha imali bathi mangiyokwenza idemo yezingoma ezimbili bafuna ukuzwa. Ngampela siyenzile base bawuthanda umsebenzi wami wathi uMthalane ngizoba uBoneni igama lami wathi uyabona ke ukuthi uculile ngempela, baboneni ke njengoba bevumile ukuthi ulakhe iqembu. Libe seliqhamuka kanjalo-ke ligama ngathi ngizokuba nguBoneni ngoba lalingekho leli gama. Ngikhiphe i-albhamu yokuqala ethi "Isikweletu Asiboli" yathokozelwa kakhulu," kusho uBoneni.
Uthi emuva kwalokho kushone uMthalane kwaba sengathi kuphelile ngaye emculweni kwazise ubeyikho konke kuyena ubemfundise okuningi kwezomculo. Uthi ubuhlunga abuzwe ngokushona kwakhe ngeke abulinganise nalutho.
Utshele ILANGA ukuthi aphele lapho amathemba empilo kwaphela isikhathi eside emile engaculi waze wathola ucingo oluvela kuMnu Meshack Masondo(ongasekho) we-NTP music production ebuza ukuthi usafuna yini ukucula. Uthi-ke ubuyele kanjalo emculweni ngenxa kaMnu Masondo wase eqopha i-albhamu ethi " Amathemba" waze wanqoba izindondo ngayo okubalwa eyeBest Female Artist kumaSATMA, kwaba yiBest Female Artist nakuMantshontsho waphinda walala isithathu nakwiLANGA Mnandi Amahewu.
"Lonyaka wangiphatha kahle kakhulu okuyilapho ngithathe khona isinqumo sokusngula nkampani yami ngayibiza nge-IZIGI 012 ngarekhoda uMzo "Jaiva" Khanyeza wayelethe umsebenzi wakhe kumina bezibiza ngaManono ngathi kuye abazibize ngaMa-AK47 base bekhipha i-labhamu ethi "Isigebengu", akugcinanga lapho ngabe sengiqopha uFihliskhwele ethi "igalelo"," kusho uBoneni.
Uthi yena ungumculi onamaphupho ngalo mculo njengoba eminyakeni edlule eqhamuka nomjikelezo obuseThekwini naseGoli wokuhlonza abaculi azobarekhoda nakuba engalutholanga uxhaso lwezimali. UBoneni ubethandana noMthalane kanti unezingane ezine okungamfana namantombazane. Uke wahlomula ngendondo yeBest Female Atist kumaSouth African Voluntary Awards(SAVA) nge-albhamu ethi "Ndinokuda".